Nzira yekutenga Bitcoins nePaypal | Economy Finance
Nzira yekutenga Bitcoins nePaypal
Dai wakazvibvunza makore mashoma apfuura kuti ungatenga sei Bitcoins nePaypal, mhinduro yaungadai wakawana ingadai isina kunaka nekuti, kusvika nguva pfupi yapfuura, Paypal yakadzivirira kutenga uye / kana kutengesa Bitcoins. Nekudaro, izvi zvachinja uye iyi chaiyo wallet sevhisi inotokutendera iwe kuti uite kutengeserana nemari yeInternet.
Kana iwe uchida kuziva kutenga Bitcoins nePaypal, izvo zvaunofanira kufunga nezvazvo usati wazviita uye zvakare mushure, uye mimwe misoro inonakidza, usazvinetse, isu taita muunganidzwa weruzivo pano.
1 Chii chinonzi Paypal
2 Chii chinonzi bitcoin
3 Maitiro ekutenga Bitcoins nePaypal nhanho nhanho
3.1 Chii chekuchengetedza mupfungwa
3.2 Unofanira kuzviongorora
3.3 Munotengesa nemadhora
3.4 Mapuratifomu ekutenga nekutengesa bitcoins nePaypal
4 Kubhadhara ne bitcoin kunogamuchirwa here?
Chii chinonzi Paypal
Chekutanga pane zvese, tinoda kutsanangura zvishoma kuti rimwe nerimwe rematemu akakosha chii. Muchiitiko ichi, tiri kutaura nezvePaypal, kambani yeAmerican (American) mabviro ane basa iri ipa online yekubhadhara system. Izvi zvinoitwa kuburikidza nekuchinjisa mari pakati pevashandisi vePaypal. Ndizvozvo Kuti uendese mari kune mumwe mushandisi, vese vanofanirwa kunge vaine Paypal account.
Kune akati wandei emhando dzeakaundi uye zvakare kutengeserana. Inonyanya kushandiswa kushandisa kutumira mari pakati peshamwari, iyo isina makomisheni kana vanhu vaviri vari munyika imwe chete. Kana kuchinjirwa kukaitwa kune dzimwe nyika panogona kuve nekuwedzera kwemari inogona kuita 5 euros kana kudarika.
Kune rumwe rutivi, bitcoin is a cryptocurrency uye, panguva imwe chete, nzira yekubhadhara. Iyo inoratidzirwa nenyaya yekuti hapana mutongi mumwe chete, kana bhangi, nenzira yekuti kutamiswa kunoitwa pakati pevashandisi, vese vakaenzana kune mumwe nemumwe, kuburikidza nesoftware.
Maitiro ekutenga Bitcoins nePaypal nhanho nhanho
Sezvatakambokuudza, kusvika nguva pfupi yadarika hauna kukwanisa kutenga bitcoins nePaypal. Asi zvakadaro Mukutanga kwa2021, kambani yakagonesa mukana uyu, kune vagari vemuUnited States chete. Kwete bitcoin chete, asi iwe unogona zvakare kuenda kuLitecoin, Ethereum, kana Bitcoin Cash.
Ehe, zvinogoneka kuti ichawedzera kune dzimwe nyika nekufamba kwenguva kana iyi kuyedza yekutanga ikabudirira. Mukuwedzera, pfungwa yekuyeuka ndeyokuti kune mimwe mitemo inofanirwa kusangana, yakadai sekuchinjana pakati pevanhu vanoshandisa Paypal, kuderedza mamwe mabasa kana, kana pane matambudziko, Paypal inogona kukumbira chiyero. Uye imwe pfungwa yekuchengeta mupfungwa ndeyekuti Iwe haugone kuve nekutonga kweiyo cryptocurrencies, asi chiyero chavo chete.
Saka, kuti iwe uzive mashandiro anoita theme, tinokupa matanho aunofanirwa kutora.
Chii chekuchengetedza mupfungwa
Kana iwe uri muUnited States kana uchikwanisa kushanda munyika iyoyo kuburikidza nedzimwe sarudzo, unofanirwa funga nezvemakomisheni. Uye ndezvekuti Paypal haisi yemahara, inoda kubhadhara makomisheni anogadzirwa nekuchinjisa kunoitwa.
Kazhinji, tinotaura nezve a muripo we5,4% yezvese kutengeserana pamwe nemari yakatarwa yeUSD 0,30. Mune mamwe mazwi, isu tichafanirwa kutakura mafizi maviri, iyo yakatarwa uye inoshanduka inoenderana nehuwandu hwemari inotamiswa.
Pamusoro peaya maPaypal makomisheni, kune mamwe aunofanirawo kufunga nezvawo, ayo ari iyo yepuratifomu yaunosarudza kuwana iyo bitcoin. Uye kune mamwe makomisheni pane chaiwo mari yekutengeserana.
Pakupedzisira, mutengo wauchabhadhara hausi kuzova kukosha kwechokwadi kwaunowana izvi, asi kune izvo tinofanira kuwedzera akati wandei makomisheni akakosha ayo, kunyangwe angave asina kukwirira, akakosha.
Kuti uite kutengeswa kwemabitcoins, chimwe chezvaunofanirwa kusangana nacho ndechekuti nyoresa uye simbisa data rako. Ichi chinhu chinodiwa nemirairo yekutonga, saka unofanirwa kutevedzera kuti ushande ne bitcoin.
Munyaya yeSpain, izvi zvinogadziriswa nekutumira chitupa (nemufananidzo) kana humbowo hwekugara kuSpain.
Izvo zvakawanda kwazvo cryptocurrency-ane hukama mapuratifomu anogara achitengesa nemadhora eUS, kureva, USD, zvose kutenga nekutengesa, nenzira iyo muPaypal unofanira kuita izvi.
Izvo hazvireve kuti iwe unofanirwa kuve uine USD muakaundi yako, sezvo yekubhadhara papuratifomu inogona kunyatso shandura mari yako kune iyo yekushanda. Asi iwe unofanirwa kufunga nezvekuti mari yekushandura ingave yakawanda sei, sezvo ingave iyo nyaya yekuti iwe unorasikirwa nemari, kana kuti imwe komisheni inoshandiswa.
Mapuratifomu ekutenga nekutengesa bitcoins nePaypal
Sezvatakambokuudza kare, Paypal chingori chekubhadhara. Izvo zvaunoda chaizvo kutenga uye / kana kutengesa bitcoins ipuratifomu inobvumidza iwe iyo kuchinjanisa pakati pevashandisi uye kuti, nekuwedzera, kubhadhara kunogona kuitwa nePaypal.
Muchiitiko ichi, inonyanya kukurudzirwa ndeiyi:
LocalBitcoins. Inobva kuFinland uye yave ichishanda kubvira 2012. Inogona kutengwa uye kutengeswa mahara asi kana zviziviso zvakaitwa, makomisheni anobhadharwa (1%). Inobvumira kushandisa Paypal, (mushure mekusimbiswa, hongu).
Paxful. Ndiyo imwe yeinonyanya kuzivikanwa, Old Capitol Trail uye yave ichishanda kubvira 2015. Inotungamirirwa muEstonia uye hapana komisheni yekutenga inobhadharwa kunze kwekuti iwe uri mutengesi (1% inobhadharwa ipapo).
eToro. Nekwakabva kuCyprus, uye kushanda kubvira 2007, ndeimwe yeaya anobvuma Paypal kubhadhara. Ehe, ine makomisheni, 0,75% mutsauko uye nehusiku makomisheni.
XCoins. Inodzorwa neUnited States Financial Crime Control Network, yakavambwa muna 2016 uye parizvino ine komisheni yakakosha: 2,9% pamwe nemadhora 0,30 / 5% yechikwereti chose.
Kubhadhara ne bitcoin kunogamuchirwa here?
Iye zvino, iwe unofanirwa kufunga nezve kana chiri chinhu chakakodzera kana kusatenga uye kutengesa bitcoins kubvira kune mabhizimisi mashoma ayo, pari zvino, anogamuchira mari yekunze senzira yekubhadhara. Mukuwedzera, mutengo wepamusoro we bitcoin imwe chete inoita kuti ive mari iyo vashomanana vanogona kuwana nei, vachifunga izvi zvose, nokuti ikozvino hazvingabatsiri kutenga kana kuzvichera, ndicho chikonzero vashomanana vakave vakazvipira kuita izvi. tengesa mari idzodzo.
Hazvirevi kuti havadaro, hongu, asi kushandiswa kwemari idzodzo hakusati kwapararira zvekuti unoda kutenga Bitcoins.
Zviri pachena kwauri kuti ungatenga sei Bitcoins nePaypal?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Negocios » Nzira yekutenga Bitcoins nePaypal
Chii chinonzi ICEX